Casa Kokopelli - I-Airbnb
Haieu, Județul Bihor, Romania
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDorina
Indlu encinci entsha eyenziwe ngamaplanga, enoyilo lwangoku, i-AC kunye nobushushu + kwiyadi yakho yangasemva. Imfihlo ukonwabela urhatya oluhle lwasehlotyeni kwidesika, ngokujingi okanye ukugxotha inja yakho :).
Kufutshane kakhulu nenduli apho unokuyonwabela ukuhamba ehlathini, yiya kwindawo yokujonga imbonakalo entle ngokwenene, yenza i-paragliding okanye ibhayisekile yeentaba (enduro, ukuhla, ukuwela ilizwe).
Ikwakufuphi kakhulu neBaile Felix, iBaile 1 Mai, iOradea.
Yonke indawo isesandleni sakho, kuquka nentendelezo. Kufana nendlu yakho, eBaile 1 Mai :).
4.67 · Izimvo eziyi-12
Ubumelwane yinto entsha, eneentsapho ezincinci ezikufutshane. Ngeengokuhlwa zasehlotyeni, kumnandi ukubona nokuva igquba labantwana bethu bedlala ngaphandle kunye nabantu abancokolayo - amava ayinyani nakhethekileyo, ekunzima ukuyibona esixekweni. Musa ukumangaliswa ukuba abantu bathi Sawubona - yiba mnandi kwaye uyibuyisele, uthembise ukuba akuyi kuba buhlungu :).
Umbuki zindwendwe ngu- Dorina
Ndiyathanda ukuncokola, kodwa ndiyaqonda ukuba abanye abantu bafuna ukuphumla ngasese. Nokuba imeko ithini na, ndonwabile ukubonelela ngamava am esikhokelo sasekhaya kwaye ndiphendule imibuzo.